Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Giovani Lo Celso Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Giovani Lo Celso na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinaụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Cgbọ ala, Net Worth, Web na Personal Life
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara na-egwu egwu nke Argentinian. Anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata gaa na gallery - a nchịkọta zuru oke nke Giovani Lo Celso's Bio.
Ndụ na ịrị elu nke Giovani Lo Celso.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ ọkachamara dị ukwuu onye ọkpụkpọ egwu nke ghọrọ onye na-agbanwe egwuregwu maka Spurs n'okpuru Jose Mourinho.
Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle mbipụta anyị nke Giovani Lo Celso's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Giovani Lo Celso nke Childhoodmụaka - Ezigbo Ezinụlọ na Ndụ Mbido:
Maka ndị na-ebido ebido, aha ya bụ Football Genius “Monito". Giovani Jiri Celso a mụrụ na 9th ụbọchị Eprel 1996 n'obodo Rosario na Argentina.
Ọ bụ nke atọ n'ime ụmụ anọ nne ya mụrụ, Sandra na nna ya, Juan Lo Celso.
Giovani Lo Celso mụrụ nne na nna ndị amachaghị banyere ha. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram na PxHere.
You maara na Giovani bụ mba Argentine nke agbụrụ ndị agbụrụ na agbụrụ ezinụlọ Italiantali?
A zụlitere ya na agbata obi Sarmiento na Rosario ebe ọ na-enwe ọ funụ na nwata na-etolite n'akụkụ nwanne ya nwoke nke nta - Francesco na ụmụnne nwanyị abụọ ndị tọrọ Luciana & Agustina.
Giovani na-eto eto nwere obi ụtọ na nwata na-etolite na nwanne ya nwoke nke nta Francesco na mmadụ abụọ ndị ọzọ.
Na-etolite na nzụlite ezinụlọ dị n'etiti na Sarmiento agbata obi, ọ bụụrụ Giovani ihe na-agaghị ekwe omume ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ.
Thatlọ nke Giovani bi na ya bụ naanị 5 ụlọ site na nnukwu bọọlụ bọl. O nwekwara nnukwu ụgbọala maka Giovani ka ya na nwanne ya nwoke bụ Francesco na-egwu bọl.
Giovani Lo Celso Mmụta na Ọrụ Buildup:
Dị ka ọtụtụ ndị ọchịagha etiti, Giovani weere nzọụkwụ mbụ ya na asọmpi asọmpi na klọb ụmụ nwoke na mpaghara tupu ịchọrọ mkpebi nke klọb na ọgbakọ iji bido ọrụ ntorobịa ya.
Clubslọ ndị a na-eto eto gụnyere San Jose, otu klọb mpaghara ebe ọrụ Giovani malitere nke ọma tupu ọ sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Atlética Jorge Griffa nke ama ama na Argentina maka ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ afọ abụọ.
Ọ na-egwuri egwu maka klọb nwata n'oge ọ bụ nwata.
Giovani Lo Celso Biography - Ndụ Mmalite Ndụ:
Ka ọ na-erule oge Giovani dị njikere ịmalite ọrụ ntorobịa ya, o nwere onyinye sitere na ndị otu kachasị elu gụnyere akụkụ Bekee - Everton.
Otú ọ dị, mgbe ahụ 15 dị afọ iri na ụma nyefere ụlọ ọrụ Rosario Central na mmezu nke nrọ nwata.
Gba egwu maka Rosario Central bụ nrọ nke ọ jigidere ruo ọtụtụ afọ ma na-atụ anya inweta ya.
Mgbe ọ nọ na Rosario Central, Giovani na-eto eto na nka na ntozu oke ka ọ na-eto site na klọb.
N'ezie, ndị France nọ na France nwere anya na Giovani ruo ọtụtụ ọnwa wee banye na atụmanya bọọlụ mgbe ọ gwụchara oge izizi ya (2015/2016) maka Rosario Central.
Giovani Lo Celso Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Giovani amaliteghị ịkpọ PSG obere oge ha debanyere aha ya. Ebinyere ya na Rosario Central iji nweta ahụmịhe nke otu maka oge 2016/2017.
Mgbe emechachara ego ọ na-akwụ, onye na-egwu egwu na-aga PSG ma nwee obere ahụmahụ na-egwu n'akụkụ ndị na-amasị ya Dani Alves, Adrien Rabiot, Draxler na Cavani n'oge oge 2018/2019.
Mgbe emechara ego ọ na-eme, onye midfielder kpọọrọ ya nọrọ na Rosario Central wee gafee ebe dị elu.
Ọ dị mma ịmara na PSG enweghị ebe na-adịgide adịgide maka Giovani. Dika odi, ha enweghi nsogbu ibinye ya na Real Betis nke Spain na nhọrọ nke izu.
Ọ bụ na Real Betis n'okpuru Onye na-eche banyere ya na Giovani chọtara ụdị wee kpebie ime ka nkwekọrịta ya na-adịgide adịgide na klọb maka ebumnuche doro anya (karịa oge egwuregwu).
Giovani Lo Celso Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'elu ọrụ ya na Real Betis, Giovani nwetara aha ọma nke igwe na-ebute ihe mgbaru ọsọ na-egbu egbu, mmepe nke na-eduga ndị Tottenham Tottenham Hotspur ịbanye na mbinye ego oge.
Otú ọ dị, Argentine gbalịsiri ike na klọb ahụ, ọ dịghị ekele maka mmerụ ahụ hip wepụtara mgbe ọ na-arụ ọrụ mba ụwa.
Giovani nwere olile anya ka na-anwa ijide ebe ọ bụla na klọb mgbe onye obodo ya Mauricio Pochettino dochie anya ya Jose Mourinho.
N'adaghị mbà, Giovani rụrụ ọrụ iji nweta ihu ọma n'anya onye njikwa ọhụụ ya site na ịmepe akara ahụ n'oge Tottenham meriri 4-0 na Red Star Belgrade na UEFA Champions League.
N'oge na-adịghị anya tupu o mee ka ọnọdụ ya dị ka Spurs dị egwu site na ịchọta ihe mgbaru ọsọ mmeghe na mmeri 2-1 megide Middlesbrough na iko FA.
Aha mara mma nabatara ya mgbe o nyechara ihe mgbaru ọsọ dị mkpa nke mere ka ọkwá ya dị ka otu n'ime ndị egwu egwu Spurs.
Ọ bụ naanị obere oge tupu anyị ahụ ya na ndị otu bọọlụ, Harry Winks, Tanguy Ndombele, Dele Alli na Gedson Fernandes kwaga Spurs na ọkwa nke ọzọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Giovani Lo Celso Hụrụ Ndụ Ndụ:
Ewezuga ọrụ ndụ Giovani Lo Celso, ọ nwere ndụ ịhụnanya dị ịtụnanya nke enyi ya nwanyị Magui Alcacer mere ka ọ maa mma.
Ọ bụghị naanị enyi nwanyị Giovani mana ọ bụ ụdị uwe eji egwu mmiri, physiotherapist yana kinesiologist.
Site na profaịlụ dị ịtụnanya, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Giovani hụrụ n'anya ma jiri kpọrọ enyi ya nwanyị onye ọ zutere ọtụtụ afọ gara aga na Rosario.
Mmekọrịta Giovani na Magui emeghị ka ọmụmụ nwa ọ bụla - n'oge ederede - ọ bụghịkwa ịhụnanyabirds nwere nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị n'alụghị di.
Zute Giovani Lo Celso Nwanyị Magui Alcacer.
Giovani Lo Celso Ndụ Ezinụlọ:
N'ịga n'ihu na ndụ ezinụlọ Giovani Lo Celso, a gọziri ya inwe ndị nne na nna na ụmụnne na-akwado ya. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndị ezinụlọ Giovani na-amalite site na nne na nna ya.
Banyere nna na nne Giovani Lo Celso:
Juan Lo Celso na Sandra bụ nne na nna nke Midfield. Onyinye ha nyere nnukwu aka na mmepe Giovani ka na-echeta ya.
Dị ka ndị dị otú a, onye na-ahụkarị midfield na-adị ngwa ịja nna ya mma maka ịkpọrọ ya ịzụ. Ọ dịghị echefu icheta na mama ya na-adụ ya ọdụ mgbe nile ka ọ dị umeala n'obi ma lekwasị anya na bọl.
Ndị nne na nna Giovani ka ya na ya nwere mmekọrịta chiri anya - n'oge edere - ma na-agba mbọ iji hụ na ọ kacha nweta ndụ.
Banyere ụmụnne Giovani Lo Celso:
Dị ka anyị kwuburu, Giovani Lo Celso bụ nwa nke atọ a mụrụ nye ndị mụrụ ya. Ọ nwere ụmụnne nwanyị abụọ amatabeghị aha ha aha ha bụ Luciana na Agustina yana nwanne nwoke nke obere - Francesco onye na-egwuri egwu dị ka onye etiti maka Rosario Central n'oge edere.
Siblingsmụnne 4 niile nwere ihe kachasị mma nke oge ndụ ka ha na-etolite. Ha hụkwara ibe ha n’anya ma na-akwado ibe ha. Ndị nne na nna Giovani Lo Celso mụrụ ụmụ ndị a.
Site na LR: Francesco, Giovani, Luciana, Agustina na Giovani ọzọ.
Banyere ndị ikwu Giovani Lo Celso:
N'ịga n'ihu na ezinụlọ ezinụlọ Giovani Lo Celso, ọ dịghị ndekọ ọ bụla banyere nna nna ya na mgbọrọgwụ ezinụlọ ya, karịsịa nne na nna ochie ya yana nne nne na nne nne.
N'otu aka ahụ, ndị nne na nna nwanne Giovani amabeghị nke ọma ebe amabeghị ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya n'oge edere akụkọ ndụ a.
Giovani Lo Celso Ndụ Nke Onwe:
Ọnye na-bụ Giovani Lo Celso?… Have nwetụla mgbe ị na-eche banyere ihe na-eme ka Giovani Lo Celso kwụọ? Kedu otu ị siri gbalịsie ike ịmata ịdị mkpa nke ụdị onye ọ bụ?
Nke a bụ naanị ebe ziri ezi iji mee ka anya gị hụ ihe ederede na-ekpughere eziokwu banyere onye na-egwu egwuregwu iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Iji malite, onye Giovani gosipụtara àgwà ndị ndị mmadụ gosipụtara site na akara akara Zodiac Aries.
Ọ nwere oké ọchịchọ, dị mfe, nwee ọgụgụ isi, nwee ume ma ọ nweghị nsogbu na ikpughe eziokwu gbasara ndụ ya na nke onwe ya.
Ihe ndị Midfielder nwere na ihe omume ntụrụndụ ya gụnyere igwu mmiri, ime njem ma soro ezinụlọ ya na ndị enyi nọrịa ezigbo oge.
Oge dị mma na ndị enyi pụtara ihe dị egwu nye onye na-eto eto.
Giovani Lo Celso Web Life Eziokwu:
Banyere ego Giovani Lo Celso na-eme ego na imefu ego, ọ na-enweta ezigbo ego na ụgwọ na ụgwọ maka ịgba bọl na-agba elu mgbe nkwenye na-enye aka na uto nke akụ ya bara ụba nke a ka na-enyocha n'oge edere bio a.
A hụbeghị onye na-anya ụgbọ ala ka ọ na-anya ụgbọ ala nke nwere ike ikwenye na enyo banyere ndụ okomoko ọ na-anụ ebe ọ bụ na amabeghị uru ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọ bi na ya.
Agbanyeghị, o nwere ihe ọ ga-eji ezumike ezumike na ebe ezumike dị oke ọnụ gụnyere Disneyland Park.
Giovani Lo Celso- Hụ onye hụrụ ka ọ na-ekpori ndụ na Disneyland Park.
Giovani Lo Celso Eziokwu efu:
Icheta akụkọ ndụ Giovani Lo Celso na akụkọ ndụ anyị, ebe a ka amachaghị ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị banyere ya.
Banyere ihe mgbaru ọsọ Giovani: dị ka Bale & Gabriel Jesus, Giovani pụrụ iche na-eme ihe mgbaru ọsọ ya site na iji aka 5 ya gbatị aka nri ya.
Mgbe onye na-egwu egwu na-anọ ya, ọ na-eji mkpịsị aka gbatịrị aka ekpe ya aka ekpe.
Dabere na Midfielder, mkpịsị aka isii a gbatịrị agbatị na-asọpụrụ onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya gụnyere onwe ya.
Ọ bụghị oge ọ bụla ị hụrụ ememme mgbaru ọsọ pụrụ iche nke nwere ihe dị mkpa.
Banyere Giovani si Italianmụ amaala Italiantali: Mid Middergha nwere ihe nketa Italiantali.
Ya mere, o nwetara nwa amaala na mba ahụ ma nwee paspọtụ Italiantali na nke ahụ. Agbanyeghị, Giovani dị ka Papu Gomez ahọrọla ịnọchite Argentina.
Rating FIFA: You maara nke ahụ Giovani Lo Celso's FIFA 20 N'ozuzu nke 83 na-ekwu okwu ọma banyere ego ọrụ o tinyegoro na nka ya kemgbe ọ malitere ịgba bọl na-elu?
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ nwekwara ọnụọgụ ikike maka ihe ruru 89. Enweghị ịgọnahụ eziokwu ahụ na ọkwa ahụ agaghị aga ebe ọ bụla kama elu!
Lee ọkwa dị egwu ma na-ebili nke na-ekwu okwu ọma banyere mmepe Giovani Lo Celso na bọọlụ elu-elu.
Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ: E nyeghị Giovani Lo Celso ị smokingụ sịga n'oge edere a. Agbanyeghị, ọ na-a withụ mmanya na-aba n'anya ya na ndị otu egwuregwu, ezinụlọ na ndị enyi n'oge ndị pụrụ iche.
Ogbugbu: Onye midfielder - nke dị elu nke ụkwụ 5, sentimita 10 - na - egwuri egwu n'egwuregwu subconscious nke ndị na - eto eto na - enweghị egbugbu n'oge edere.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ nwere ike ịkọwa atụmatụ nke ịme ahụ ahụ n'ọdịnihu mgbe ọ gosipụtara onwe ya dịka otu n'ime ụwa kacha mma.
You hụrụ nke ọ bụla n'ime Giovani Lo Celso tattoo? Us Ka anyị mara na igbe igbe.
Religion: Ndị nne na nna Giovani Lo Celso zụlitere ya n'ịgbaso okpukpe Ndị Kraịst. Nke a pụtara ìhè na aha nne ya Sandra na ụmụnne ya - Augustina na Francesco - nwere.
Agbanyeghị, amabeghị ma Giovani na-eme Kristianwụ n'ihi na ọ bụghị onye ukwu n'okpukpe na soshal midia na n'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata na Giovani Lo Celso Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.